musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Japan Kuputsa Nhau » Samoa Tourism ine zvakawanda zvekutenda Japan nazvo
Kuputsa Kufamba Nhau • Kurwisa • Hurumende Nhau • Investments • Japan Kuputsa Nhau • nhau • Samoa Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Mumiriri weJapan Aioki akati chiteshi chitsva paMatautu muSamoa chava kugona kuunza kuSamoa “vashanyi vazhinji vekunze vanozofarira hunhu hwakanaka, tsika dzakasarudzika uye mutsa wakanaka wevaSamoa vanhu.
“Guta guru reSamoa rine chiteshi chengarava chichangobva kuvandudzwa kuMatautu. Iyo US $ 30-miriyoni chirongwa chekuvandudza kuchengetedzeka uye kushanda pachiteshi chikuru cheApia chakatora makore maviri uye chakavhurwa vhiki ino nemumiriri weJapan kuSamoa.
Iyo purojekiti inobhadharwa zvizere nehurumende yeJapan pasi peJapan International Cooperation Agency.
Iko kukwidziridzwa kunosanganisira kuwedzerwa kwemamita-103 ebherth nyowani uye kugadzirisa uye kuwedzera kwenzira nyowani yevanofamba.
Mutungamiriri weSamoa, VaTuilaepa Sailele Malielegaoi vakati chiteshi ichi chakakwidziridzwa chinobatsira zvishuwo zveHurumende zvekuvandudza, kuchengetedza, kuchengetedza uye kuchengetedza nharaunda inotsigira kusimukira kweSamoa nehupfumi.
Apia Port inobata angangoita 97% yezvinhu zvese zvekunze zvekutengeserana zveSamoa.